Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJennifer
Kufuphi nesikhululo sikaloliwe (imizuzu eyi-15 ngeenyawo) kunye neziko ledolophu (imizuzu eyi-15 ngeenyawo) kwaye ihanjiswa yi-tram (i-"Fontaine-Argent" yokumisa), indawo yam yokuhlala ifanelekile ukuhlala e-Besançon ukuphonononga isixeko.
Uhlobo lwegumbi eli-2 kunye negumbi lokulala elahlukileyo, liya kuhambelana nesibini esi-1 (okanye isibini esizayo ;-) okanye abahlobo aba-2; iyakwazi ukuhlalisa izibini ezi-2 ezinesofa eguqukayo kwigumbi lokuhlala.
Ifumaneka kumgangatho ophezulu (uphakamise), unethafa elinetafile kunye nezihlalo zeedekhi.
Ifakwe kumgangatho ongaphezulu (kunye ne-lifti), indlu yam inethafa entle enetafile yegadi kunye nezitulo kunye nezitulo zokulala, zilungele isidlo sakusasa okanye i-aperitif :-)
4.95 ·Izimvo eziyi-125
Isithili saseChaprais yindawo yokuhlala eneevenkile ezincinci, ezibekwe phakathi kwesikhululo saseBesançon-Viotte kunye nedolophu eyimbali yaseBesançon, ebizwa ngokuba yi "la Boucle". Ibonisa iingenelo kumbindi wedolophu (ukufutshane nesikhululo, izithuthi, iivenkile, njl.) ngelixa lizolile (iindawo zokutyela ezimbalwa kunye nemivalo) kwaye zifikeleleke ngemoto, nangona ukupaka akusoloko kulula.
Ndirenta kuphela indlu yam xa ndisiya ngeempelaveki okanye ngeeholide; Ke ngoko andifumaneki ngokuyimfuneko kodwa ndenza konke okusemandleni am ukuphendula yonke imibuzo yakho ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Besançon